Virgil van Dijk: “Goolasha Mohamed Salah ee Liverpool waa ay imaan doonaan” – Gool FM
Barcelona oo war rasmi ah ka soo saartay heerka uu gaarsiisan yahay dhaawaca maanta soo gaaray Ivan Rakitić
Cristiano Ronaldo oo la bar-bardhigay Ballon d’Or abaal-marinta Nobel Prize
İlkay Gündoğan oo doortay xiddiga uu arko inuu yahay kan ugu fiican Taariikhda…(Ma Lionel Messi mise Cristiano Ronaldo?)
Macallin Unai Emery oo la siiyey kulamo kooban oo uu ku badbaadsado shaqadiisa Kooxda Arsenal
Vincent Kompany oo ka hadlay xaallada ay haatan ku sugan tahay Man City & sida looga gudbi karo
Raheem Sterling oo laga saaray xulka qaranka England sabab la xiriirta dagaalkii uu la galay daafaca Liverpool ee Joe Gomez
Kooxda Liverpool oo horumar ka sameysay saxiixeeda ugu horreeya ee bisha Janaayo oo ay ka dhiganayso xiddig ka dheela Premier League
Virgil van Dijk: “Goolasha Mohamed Salah ee Liverpool waa ay imaan doonaan”
(Liverpool) 19 Maarso 2019. Difaaca xulka qaranka Netherlands ee Virgil van Dijk ayaa shaaca ka qaaday in xiddiga ay ka wada tirsan yihiin Reds ee Salah uu markale sida ugu dhaqsiyaha badan shabaqa soo taaban doono oo ay imaan doonaan goolashiisa.
Mohamed Salah ayaa si dhaqso ah bilaabi doona inuu goolal u dhaliyo si aan ugu dhaafno tartanka horyaalka Premier League ee Liverpool ayaa laga soo xigtay difaaca joogga dheer ee Virgil van Dijk.
Liverpool ayaa labo dhibcood oo nadiif ah kaga hoggaaminaysa horyaalka Manchester City inkastoo kooxda difaacanaysa horyaalka Premier League ay hal kulan oo aysan ciyaarin gacanta ku haysato, xiddigaha Reds ayaana aadaya fasaxa caalamiga ah ee qarammada kaddib markii ay guul 2-1 garoonka Craven Cottage Axaddii kaga soo gaareen naadiga Fulham.
Laakiin Salah ayaa ku dhibtoonaya waqtigan inuu goolal dhaliyo waxaana uu dhaliyey kaliya hal gool tartammada oo dhan labadii bilood ee la soo dhaafay.
Xiddiga xulka qaranka Masar ayaa fursado badan oo uu gool ku dhalin karay lumiyey kulankii ay ka horjeedeen Cottagers, waxaana uu sii dheereeyey gool dhalin la’aantiisa, isagoo 7 kulan aan shabaqa soo taaban.
Macallinka kooxda Liverpool ee Jurgen Klopp ayaa difaacay gooldhalin la’aanta Salah, kaasoo 17 gool oo horyaalka Premier League dhaliyey xilli ciyaareedkan, isagoo ka dambeeya weeraryahanka Man City ee Sergio Aguero oo hoggaaminaya gooldhalinta horyaalka Ingiriiska.
Van Dijk ayaa kalsooni ku qaba in Salah oo ka nasanaya waajibaadka xulka qarankiisa Egypt bishaan uu dib ugu soo laaban doono gool dhalintiisa kooxda Liverpool.
“Mo waa ciyaaryahan heer sare ah,” Van Dijk ayaa sidaas u sheegay Website-ka kooxda Liverpool kaddib markii ay Axaddii 2-1 uga adkaadeen Fulham kaddib gool ku laad soo daahay oo uu goor dambe u dhaliyey James Milner.
“Dadku waxay dhihi karaan wixii ay doonayaan oo dhan, laakiin waxaan qabaa in dhammaan kooxaha Premier League ay jeclaan lahaayeen inay kooxdooda ku haystaan isaga, waan heysannaa isaga, waxaana qabaa inuu si fiican u ciyaaro.
“Goolashu way imaan doonaan, taasi waa wax laga yaabo inay maskaxdiisa ku jirto, laakiin waxaan u sheegnaa mar kasta ‘waxaad u baahan tahay kaliya inaad sii shaqeyso, sii socoto, waadna fiicnaan doontaa.”
Kooxda Liverpool ayaa dib ugu soo laaban doonta ciyaarista horyaalka Premier League 31 bishaan Maarso markaasoo ay garoonkooda Anfield ku soo dhoweyn doonaan kooxda kaalinta saddexaad ee horyaalka ku jirta ee Tottenham.
Callum Hudson-Odoi oo markii ugu horreysay looga yeeray xulka England.. (Yaa laga tagay, yaase ku soo baxay liiska saddexda libaax?)